Sochii WBO’n tibbana Konyaalee Lixa Oromiyaa garaagaraa keessatti taasisaa jiruu fi tarkaanfilee diina irratti fudhatamaa jiran, akkasumas, dhimma akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti, marii Oromticha jiraataa Magaalaa Naqamtee tokkoo waliin taasifame.
Sagantaa Kamisa Fuulbana 23, 2021
Dargaggoonni Oromoo lama, galgala edaa (Fuulbana 22, 2021) Magaalaa Gimbii keessatti, rasaasa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan rukutamuun, tokko battalumatti lubbuun darbuu; tokkichi ammoo Hospitaala Gimbiitti yaalamaa jiraachuu.
Olola dhimma Obbo Goollicha Dheengeen wal-qabsiifamee oofamaa jiruu fi, afaanfajjii olola kana duubaan dhufuu malu irraa, Uummanni Oromoo ofii isaas mooraa qabsoo isaas akkamittiin tikfachuu qabaa irratti, marii Oromticha dhimma kana itti-dhiheenyaan quba-qabu waliin taasifame.
Tajaajilli Hospitaala Fiichee keessatti tajaajilamtootaaf kennamu Afaan Oromoon akka hin kennamneef shirri qaama hooggansaan xaxamu daran hammaachuun, yeroo ammaatti Hawaasni Oromoo bakkasii Afaan Amaaraan akka dhibee ofii himatuu fi tajaajila fayyaa argatu taasifamuun, rakkoo hamtuu mudachaa jiraachuu.
Oromoota manneen hidhaa impaayerattii garaagaraa keessatti hidhamanii gidirfamaa jiran baasuun ajjeesanii bakkeetti gatuun, kutaalee Oromiyaa danuu keessatti LMKII’n raawwatamuun amaleeffatamee jiru, Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Shaggar, Ona Gindabarat keessatti ammas irra-deebiin, Roobii Fuulbana 15, 2021 galgala, Oromoonni sadii mana hidhaa keessaa baafamuun ajjeefamuu.
Marii Itti-aanaa Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa, Jaal Waaqomsaa Guutuu waliin taasifame: Waraanni Bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u, tarkaanfilee lukkeelee diinaa fi qabeenya isaanii irratti kallaattiin fudhatu jabeessee itti-fufee jiraachuu.
Sagantaa Kibxata Fuulbana 7, 2021
Sagantaa Dilbata Fuulbana 5, 2021
Sagantaa Kamisa Fuulbana 2, 2021